स्कुलले पढाउने तरिका बदल्नै पर्छ - Nepal Readers
by जे एल ए
मेरो अनुभवमा स्कुलले मलाई रचनात्मक बन्न सिकाएन। त्यसले त मलाई बोरिङ (दिग्दार) बन्न सिकायो। किन्नका लागि धेरै पुस्तकहरु पाइन्छन् तर कुनै किताबले पनि ममाथि प्रभाव पारेको छैन। सुरुमा मलाई लाग्यो कि म स्कुलका लागि उचित पात्र होइन तर पछि गएर मैले बुझें कि स्कुल नै मेरा लागि उचित छैन।
स्कुलहरुले विद्यार्थीहरूलाई किन पढ्नुपर्छ भनेर पढाउदैनन्। तिनिहरुले के बिषय हो र त्यसमा कसरी पास हुने भनेर पढाउछन् तर त्यो विषय किन पढ्नुपर्छ भनेर छलफल गराउदैनन्। स्कुलहरुले किन कुनै बिषय महत्वपुर्ण हुन्छ र मैले त्यस बिषयलाई वास्तविक जीवनमा कसरी उपयोगमा ल्याउन सक्छु भनेर ब्याख्या गर्दैनन्। स्कुलहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित (प्रेरित) गर्दैनन्। स्कुलहरुले विद्यार्थीहरूलाई किन पढ्नुपर्छ भनेर बुझाउदैनन्, तिनले उनीहरूलाई जाँच कसरी पास गर्ने र राम्रो अंक प्राप्त गरेको रिपोर्ट कार्ड घर लिएर जाने भन्नेमात्र बताउँछन्। जाँच पास गर्नु पनि केही हो त तर हामीले पढेको कुरा दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नु अमुल्य छ।
यदि हामी उच्च कोटिको शिक्षा चाहन्छौं भने मेरो विचारमा हामीले निम्न कुराहरुमा परिवर्तन ल्याउन पर्छ।
विज्ञहरुलाई (professionals) पढाउन लगाउनुहोस्। मैले सन २०१५ मा सूचना प्रविधिमा (आइटि) स्नातक तह उतिर्ण गरे। म भाग्यशाली रहें कि मैले स्नातक बनेपछि सफ्टवेर इन्जिनियरको जागिर पाएँ, तर मसँग उक्त जागिरमा राम्ररी काम गर्न आवश्यक सिपको कमि थियो। मैले त्यो जागिर धान्न विभिन्न तालिमहरु लिनै पर्ने भयो। मलाई यस्तो लाग्यो कि मैले ४ वर्ष कलेज पढ्दा सिकेको भन्दा धेरै बढि यी ३ महिनाका तालिमहरुमा सिकें। मलाई कलेज पढ्नु समयको बर्बादी थियो जस्तो लाग्यो किनभने धेरै जसो प्रोफेसरहरु गोबर गणेश सरह थिए (उनिहरु आफुले फलाकेको कुराहरु अभ्यासमा ल्याउदैन थिए) र पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई स्नातक उतिर्ण गरिसक्दा पनि आइटि विज्ञका रुपमा काम गर्न सक्षम बनाउदैनथ्यो।
थोरै किताब धेरै काम स्कुलहरु किताब बेच्नमात्र रुचाउछन्। ती किताबहरु कम्तिमा पनि गह्रौं, बोरिङ र महंगा हुन्छन। कलेज पढ्दा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कक्षाहरु प्रोग्रामिङका कक्षा थिए। ती प्रोग्रामिङ कक्षाका प्रोफेसरहरु उद्योगमा काम पनि गर्दथे । म ती कक्षाहरु मन पराउथें किनभने त्यहाँ म एकै समयमा प्रोग्रामिङ पढ्न र अभ्यास दुवै गर्न सक्छु। म यस प्रकारका सिकाइका सत्रहरु रुचाउछु किनभने तिनले हामीलाई ४० किलो भन्दा गह्रौं जाभा प्रोग्रामिङको किताब किनाउने र त्यस बारे लिखित रिपोर्ट लेख्न लगाउदैनथ्यो।
म संगितप्रेमी युवक हुँ। म समय पाउँदा गिटार बजाउछु। यदि म सफ्टवेर इन्जिनियर थिइन भने जीविकाका लागि म गिटार बजाउथें होला। म संगितलाई प्रेम गर्छु। तर मलाई स्पष्ट सम्झना छ हाईस्कुलको संगित कक्षामा हामीलाई कुनै बाजा बजाउनको साटो किताब पढ्न लगाइन्थ्यो। बिषय संगित थियो तर कक्षा कोठामा मुर्दा शान्ति छाएको हुन्थ्यो। विषय संगित थियो तर शिक्षक हामीलाई कुनै बाजा बजाउन सिकाउदैनथे। बिषय संगित थियो तर शिक्षकले एउटा पनि बाजा बजाउन जान्दैनथे। त्यसैले स्कुलहरुले विद्यार्थीहरूलाई गरेर शिक्षित बन्न दिने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ न कि पढेर मात्र।
सुनौलो वृत्तमा केन्द्रित होउ स्कुलले हामीले किन सिक्नुपर्छ भनेर हामीलाई राम्ररी बुझाउन सक्दैन। फिलिपिन्समा यो किन को जवाफमा सम्भवत उनीहरुले राम्रो जागिर पाउन वा राम्रो नम्वर ल्याएर बाबुआमालाई खुसी बनाउन वा आफ्ना बाबुआमालाइ गरिबीबाट मुक्त बनाउन भन्न सक्नेछन्। यो जवाफमा सधै बाउआमा वा अरु मानिसहरु हुन्छन्। तर एक विद्यार्थीका नाताले त्यसमा मेरो निम्ति के छ? किन मैले बोरिङ बिषय पढ्नमा समय खर्च गर्नुपर्ने? यदि शिक्षकले मलाई विज्ञान पढ्यौ भने थोमस एडिसन आइज्याक न्युटनले जस्तै तिमीले पनि संसार बदल्न सक्छौ, विज्ञान र प्रविधिको सहायताले तिमीले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौ, तिमीले विज्ञान र प्रविधिबाट आश्चर्यजनक आविष्कारहरु गर्न सक्छौ, तिमीले चिताएको कार बनाउन सक्छौ भनेका भए म प्रत्येक दिन खुशी खुशी स्कुल जान्थें, मलाई शनिबारे विदा वा बर्षे बिदा पनि चाहिदैनथ्यो।
तर यदि शिक्षक कक्षा कोठा छिर्नासाथ मेरो हातमा किताब थमाउछन् र पढाउन थाल्दछन् भने मेरो निम्ति पढ्नुपर्ने र सुन्नुपर्ने कुनै जायज कारण हुनेछैन। र शिक्षक जे भन्छन् र मलाई जे जे गर्न लगाउनेछन् ती सबै मेरा लागि सोझै बोरिङ हुनेछन्। म ती सबै काम गर्नेछु किनभने ती काम गर्न आवश्यक हुन्छ न कि मलाई ती काम गर्ने चाहना छ। निष्कर्ष जब पछाडि फर्केर हेर्छु तब मलाई ङ्फुक लुटिएको अनुभव हुन्छ। किनभने वास्तविक शिक्षा वास्तव मै काम गरेर प्राप्त हुन्छ, असफलता, ती असफलताबाट सिकेर अन्तत: सफलता प्राप्त गर्नु हो। स्कुलले केवल मलाई असफल हुनु खराब हो भनेर सिकायो, सोध्नु र सहायता लिनु खराब हो र धेरै जसो अवसरहरुमा हामीहरु स्वयंले कामहरु गर्नुपर्छ भनेर सिकायो।
स्कुलहरुले सिर्जनशिल मानिसहरु विकास गर्न विद्यालय ब्यवस्थालाई नवीन (रचनात्मक innovating) बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। यथास्थितिलाई चुनौती दिने मानिसहरु, अन्य मानिसहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने मानिसहरु न कि त्यस्ता विद्यार्थीहरू जसको अभिलाषा नै परीक्षा उतिर्ण गर्ने र साधारण जीवन ब्यतित गर्ने हुन्छ। शिक्षकहरु भित्र आफुले साक्षात्कार गर्ने हरेक विद्यार्थी भित्र आगो बाल्ने अभिलाषा हुनुपर्छ।
मानिसहरु आफ्नो आधा जीवन विद्यालयमा बिताउछन्। त्यसैले शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई ठुला सपना देख्न प्रेरित गर्नसक्छन् र उनीहरुलाई ती ठुला सपना पूरा गर्न आवश्क सोच (mindset) र ज्ञानले लैस बनाउन सक्छन्।
मेरो विचारमा स्कुल कस्तो हुनुपर्छ र मानिसलाई कसरी उचित तवरले शिक्षा दिइनुपर्छ भनेर पुनरपरिभाषित गर्ने समय आइसकेको छ। हामीलाई शिक्षा प्रणाली बारे सोचाइमा आमुल परिवर्तनको (paradigm shift) आवश्यकता छ र यस्तो हुन तपाईं हामी जस्ताले यथास्थितिलाई चुनौती दिनसक्नु पर्छ।
जे एल ए